Tana Gospel Choir: hanomboka ny fankalazana ny faha-15 taona | NewsMada
Tana Gospel Choir: hanomboka ny fankalazana ny faha-15 taona
Gospel miaro mozika malagasy. Nitrandraka ary nahita ny nampiavaka azy ny Tana Gospel Choir. Nipetraka ny lazany nandritra izay 15 taona nisiany izay.
Volana febroary 2004. Tanora kristianina maromaro, natambatry ny fitiavana ny mozika sy ny fiderana an’Andriamanitra, no nitambatra ary nandrafitra ny Tana Gospel Choir. Tsikaritra tamin’izany ireo mpanakanto mpitendry efa fanta-daza toa an-dry Seta Ramaroson sy Solofo Bota, ankoatra an’i Fidy Rabearisoa, izay mpitarika. Nanomboka teo, nipetraka tsikelikely ny lazan’ny TGC, izay nitondra aina vao ho an’ny gospel teto Madagasikara.
Volana febroary 2019. 15 taona katroka ny nisian’ny Tana Gospel Choir. Maro ny zavatra nolalovana tao anatin’izany, kanefa mbola eo ihany ny TGC. Tsy havela handalo fotsiny ny fotoana, fa hisy ny fanamarihana miavaka sy makotrokotroka amin’ity taona ity.
Ho fanombohana izany, hotontosaina rahampitso alahady 3 febroary izao ny lanonana fanokafana ny jobily. Hatao etsy amin’ny Tranompokonoloona Analakely io, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Nosafidiana manokana ity toerana manan-tantara eto an-drenivohitra ity, satria tao ny TGC no niaka-tsehatra voalohany, ny volana jona 2004. Ankoatra ny seho mahazatra, hisy ny fampahafantarana fohy ny tantaran’ny TGC, sy fanehoana ihany koa ny fandaharam-ptooana ho avy.
Fantatra fa hisy ny seho goavana izay hotontosaina ao amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, ny 9 jona ho avy izao. Hisy ihany koa ny famoahana rakikira “best of”, hirakitra ireo hira nanamarika indrindra izay 15 taona izay. Hanaraka avy eon y fivoahana any ivelany sy ny fitetezam-paritra eto an-toerana.